MGBE ị gara ileta agwaetiti ANTIGUA NA BARBUDA | AAAA NA-ADªº ªº
MGBE ị gara nleta ANTIGUA NA ISE ỌR B BARBUDA
site n’aka onye edemede: Maxim Chernyshkov Ọnwa Nke Anọ 29, 2021
Osimiri Antigua na Barbuda na-emeghe ileta n'afọ niile, ebe ọ bụ na mmiri mmiri anaghị ada n'okpuru + 24. Otú ọ dị, enwere oge mmiri ozuzo, nke na-adị site na June ruo November ma nwee ike ịbacha ihe ndị ọzọ.
Mgbe ị gara ileta agwaetiti Antigua na Barbuda
Osimiri Antigua na Barbuda na-emeghe ileta n'afọ niile, ebe ọ bụ na mmiri mmiri anaghị ada n'okpuru + 24. Otú ọ dị, enwere oge mmiri ozuzo, nke na-adị site na June ruo November ma nwee ike ịbacha ihe ndị ọzọ. Yabụ, oge iji gaa na agwaetiti ahụ bụ site na Disemba ruo Mee.
Osimiri 365 nke Antigua
Agbanyeghị, ọ gaghị ekwe omume ịhọrọ ebe ezumike pụrụ iche. Antigua bụkwa ama maka eziokwu na enwere oke osimiri 365, dị ọcha, dị mma nke ọma ma dịkwa mma, otu maka ụbọchị ọ bụla n'afọ.
Nke a pụtara na ike agaghị agwụ gị izu ike ebe a. Ndị bi n’agwaetiti ahụ hụrụ agwaetiti n’anya, agwa mara mma na oke ọhịa, nri mara mma na ikuku anwụ. Ebe ugwu Antigua, nke a maara dị ka Dickenson's Bay, bụ ebe obibi maka ọtụtụ ụlọ oriri na nkwari akụ, ebe izu ike na ụsọ mmiri. Ndị na-egwu ezumike ezumike ga-ahụkarị osimiri n'anya nke dị na ndịda steeti, gbahapụrụ ma zoro ezo. Mmiri mmiri, ikuku mmiri, nsị na ịkụ azụ mmiri n'okpuru mmiri kacha mma na mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri, nke bara ụba n'akụkụ dị iche iche nke agwaetiti ahụ.
Sọ osimiri kachasị ekwo ekwo bụ Dickenson Bay na Runaway Bay. N'ịbụ nke dị n'akụkụ ugwu ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ, a na-achọkarị osimiri ndị ahụ n'etiti ndị na-eto eto na ndị na-aga oriri na ọ partyụ whoụ ndị dị njikere ịnụ ụtọ oge 24 n'ụbọchị. Obere obere mkpọtụ, ma ama, osimiri na-emeghe "Fort James" na "Deep Bay", nke jupụtakwara.
Antigua na Barbuda Beach - A na-ahụta Halley Bay dị ka nhọrọ kwesịrị ekwesị maka sọọfụ ọkachamara.
Mgbe ị nọ na-ezu ike n’agwaetiti ndị ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịgafe osimiri anọ ndị mepere emepe - “Hexbil”, otu n’ime ha bụ paradaịs maka ndị na-agba ọtọ.
Ranlọ dị jụụ na nke dị n'ebe ndịda nke agwaetiti ahụ bụ ebe obibi nke kilomita 15 nke ụsọ mmiri aja aja: Fries Bay, Duckwood Beach na Johnson Point.
Ndị hụrụ ịhụnanya n'anya ga-ahụ zoro ezo Rendezvous Bay na Doig's Beach. A mara oke osimiri mara mma dịka "Pigeon Point", nke dị n'akụkụ ọdụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri mba na "English Bay".
The Half Moon Bay Beach enwetawo ọnọdụ nke National Park, nke a na-ewere dị ka ebe kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ.
N'ebe a, ị nwere ike ijikọta azụmahịa na obi ụtọ ma debe njem nke ogige ahụ.
Maka ezinụlọ ndị nwere ụmụaka, Long Bay dịkwa mma, nwere oke osimiri dị jụụ na akuku coral nke na-echebe ụsọ oké osimiri site na ebili mmiri siri ike, ma kwe ka mmiri na ịmị mmiri. N’agwaetiti ndị a na-akpọ Antigua na Barbuda, e nwere ọtụtụ osimiri ndị ọzọ na mmiri dị jụụ na mbara ala ndị magburu onwe ha, kwesịrị ekwesị maka ezumike dị jụụ.
Galli Bay na osimiri ndị dị nso na-achọ ndị na-egwu mmiri. N'oge oyi, a na-ahụ ebili mmiri siri ike ebe a, ya mere ọ dị mkpa maka ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Ihe kachasị mma maka ndị njem nlegharị wee bụrụ oke osimiri dị nso na Cape Johnsons. Ndị hụrụ njem n'anya ga-aga leta ebe dị jụụ, ebe dị jụụ ma ọ bụ enweghị ike ịnweta n'akụkụ Rendezvous Bay.
Osimiri kachasị ewu ewu, ma n'etiti ndị bi n'ógbè ahụ ma n'etiti ndị ọbịa nke agwaetiti Antigua na Barbuda, bụ osimiri Doigs.
Ebe kachasị nwee ịhụnanya n'àgwàetiti ahụ bụ Peacock Point na osimiri ndị dị nso.
Akwa Ekwensu na Nelson-Dockyard
Na ụsọ oké osimiri nke mba agwaetiti ahụ, e nwere ihe ọzọ na-adọrọ mmasị nke onye ọbịa ọ bụla nke Antigua kwesịrị ileta. Ọmarịcha okwute mara mma, nke a na-akpọ "Akwa Ekwensu" ma ọ bụ "Ekwensu Akwa" ga-abụ ihe ọhụụ maka onye ọ bụla, n'ihi na naanị ndị nwere obi ike nwere ahụ ike nwere ike ịrịgo ya.
Ka m na-aga, n’akụkụ abụọ nke àkwà mmiri ndị njem, m na-ekpuchi ebe ebili mmiri nke na-adakwasị nkume ndị ahụ. Oké osimiri na-amali elu n'ihu.
Mgbe ị nọ n'àgwàetiti ahụ, wepụta oge iji gaa n'ọdụ ụgbọ mmiri Bekee, ọ bụghị maka osimiri, kama maka ịgagharị na ebe ngosi ihe mgbe ochie, ụlọ ahịa na ụlọ nri. A na-ahụta ọdụ ụgbọ mmiri Nelson Dockyard dị ka etiti nke ihe na-adọrọ mmasị maka ndị nwe ụgbọ mmiri na ọ bụ ihe atụ nke ntọala ndị agha mmiri nke England nke narị afọ 18.
Ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị bi na mba ahụ bi na Antigua, Barbuda bụ naanị 2% nke ndị bi na ya. N'agbanyeghị oke ọdịdị, ihu igwe ọkụ na nnabata nke ndị bi na ya, ndị njem anaghị eleta ebe a.
Jiri ụgbọ mmiri ma ọ bụ tagzi gbazitere agwaetiti ahụ - helikọpta. Ndị na-achọkarị ndị mmadụ ga-ahụ regatta n'anya, nke ndị njem nleta na ndị obodo na-ewu ewu. A na-eme kwa izu Caribbean na-eme njem kwa afọ na mbubreyo February na mmalite Machị. Ndi niile na-abata na ya. Lelee ọpụpụ nke azụ whale mgbe ị na-agba ọsọ site na nke ọ bụla n'ime osimiri 356 na Antigua.
Otu esi enweta ụmụ amaala Antigua na Barbuda
taa Antigua na Babuda Citizenship ọ dị mfe ịnweta, n'ihi mmemme ahụ, nke ọtụtụ narị ndị agbata obi anyị enyochala.
Meghe ohere ọhụụ maka ụmụ amaala ọhụụ nke steeti agwaetiti, na-enweghị akwụkwọ na ahịrị, anyị na-enyere aka inweta ụmụ amaala nke Antigua ma nye gị mmasị akụ na ụba na mba na-emepe emepe.
Zọ kachasị mfe iji nweta ụmụ amaala Antigua bụ ịzụta ezigbo ala, bụrụ onye na-etinye ego ($ 400) ma ọ bụ zụta agbụ gọọmentị.
Abamuru nke ịbụ nwaamaala Abụọ
Citizenship nweta ụmụ amaala nke Antigua na Barbuda (ụmụ amaala nke abụọ) site na enyemaka nke ụlọ ọrụ anyị nwere uru ndị a:
Ihe omuma enyere banyere onye choro ya na ndi ezinulo ya (onye nke abuo, umuaka n’okpuru 25) ndi ha na ya biri ka ana eme n’ime oge pere aka (rue onwa ato);
Ọ dịghị mkpa ileta agwaetiti iji nweta ụmụ amaala nke mba ahụ;
Enweghị ihe ọ bụla achọrọ maka ebe obibi nke onye na-arịọ arịrịọ na nke onwe ya (agụmakwụkwọ, ahụmịhe nchịkwa, wdg);
Mụ amaala Antigua nwere ike isi n'otu mba gaa mba ọzọ (njem na-enweghị visa na mba 130);
Ohere sara mbara maka ịzụ ahịa na mba ọzọ na-akwụghị ụtụ isi ego;
Akụkụ nke ikike maka ịbụ nwa amaala nke abụọ n'okpuru atụmatụ itinye ego adịghị iche na ikike nke ndị bi n'obodo.
Ihe kpatara na ekweghị
Onwe ihe onwunwe abughi nkwenye 100% nke inweta nwa amaala nke Antigua na Barbuda. A ga-agọnahụ onye na-arịọ arịrịọ ma ọ bụrụ na ndekọ ndekọ mpụ (ikpe ikpe mpụ), ọ bụrụ na enwere ihe egwu nye aha steeti (n'ihi njirimara nke onye nyocha), yana ma ọ bụrụ na onye itinye ego ahụ bụ nwa amaala steeti nke onye nkwekọrịta na ọchịchị na-enweghị visa abanyela. Nwere ike ịghọ nwa amaala Antigua ma ọ bụ site na iji atụmatụ itinye ego ma ọ bụ na ịmụ nwa. Yabụ, ụmụaka amụrụ n'agwaetiti ndị a ga-abụ ndị na-achị steeti agwaetiti na akpaghị aka.
Womenmụ nwanyị na ụmụ nwoke ndị ghọrọ di na nwunye nke nwa amaala Antigua mgbe afọ atọ gasịrị site na ụbọchị ndebanye alụmdi na nwunye ma ọ bụ ndị mejupụtara mmekọrịta ha na ụmụ amaala Britain mgbe afọ 7 gachara bụrụ ndị isi.
Agbanyeghị, a na-ahụta itinye ego na ala na ụlọ dị ka mkpebi ezi uche dị na ya. Antigua na Barbuda ụmụ amaala ga-anọgide maka ndụ. Ebe ọ bụ na mba agwaetiti ahụ bụ akụkụ nke Commonwealth Britain, ndị bi na Antigua na-erite uru na United Kingdom na, dịka ọmụmaatụ, na-amụ akwụkwọ na England.
↑ Antigua ↑ Barbuda ↑ Antigua na Barbuda ↑ Oge na Antigua na Barbuda ↑ Mgbe ị gara Antigua na Barbuda ↑ Antigua na Barbuda osimiri ↑ Ememe ezumike na Antigua na Barbuda ↑ Antigua na Barbuda ensmụ amaala ↑ Ihe kpatara ịgọnahụ Antigua na Barbuda Citizenship ↑